SABA FUULDURA BA’II QABSAA’I-Dhiigaaf Lafee Dhalootaan Hindaldaliin! – Kichuu
1. Aktvistoonni Oromoo nuti ija uummataa ‘Public Figure’ ofiin jedhan yeroo baayyee’ foddaa miidiyaa dawoo godhatanii murtoo dabarsuun uummata abiddatti oofuun daldala dantaa dhuunfaa guddifannaa ho’aa keessa seenanii jiru. Harka namaan abidda qabachuun nama hindhibu mitiiree? Jarana! Lubbuun dhala namaa waluma qixa! Daa’imni tokko garaashee qooqqifattee biyya keessaa utuu falmattuu wayyaaneen duutuufi Aktvistiin biyya alaa kanaa furdatee hamma manaa ga’u kun lubbuun isaan baatan tokkichuma. Ammoo tokkicha ta’ee utuu jiruu dhaloota qabsaa’ataa jiru kanaan daldala gurguddaa hojetachuun guyyaa guyyaan as ba’anii xiinxalaan afaan mi’eeffachaa oolu. Hiyyeessi biyya keessaa dhumaa jiraatti. Jaarmiyaa dirreetti ba’ee lolataa jiru dhabamsiisuufi sabboontota qaroo ta’an hojii isaanii dhabamsiisuufi gaazexeessitoota qaroo ta’an ala kana jiraatan akkuma wayyaaneen biyyaa ilmaan Oromoo gochaa jirtu warreen asii kunis sanumatti jiru. Garuu Saba Oromoof qabsoofna jechuun as ba’u. Waggaa lamaa oliifis saba Oromoo ardii hundaarraa gowwoomsuun maallaqa doolaara miliyoona hedduunis walitti qabatanii of ijaaraniiru. Kanatu ala kana jira.
2. Humnoonni akka kanaan ijaaraman kunneen ati iddoo madaa isaanii kan ta’e kijiba isaanii kan saaxiltu yoo taate, bilbilaan sidoorsisu, feesbuukiikee sirratti gurmuun ba’anii guggubu, Marsariitiiwwankee cabsanii beekumsa Oromoof walitti kuufame barbadeessu. Ana dabalatee namoota hedduutu madaa kanaan rukutamee cal-jechisiisfamuuf irratti hojjechiifameera. Oromoonni hayyoonni kumootaan lakkaa’amanis sababa kanaan mataa cabanii qabsofi falmannaa oromoo keessaa dugduuba deebi’aniiru.
3. Amala Shiftoota kanaa hubachuuf ammoo yaada ‘comment’ isaan sabboontotaafi qabsaa’ota kabajamoo Oromoo gurguddoorratti kennaa oolaniifi live video’isaan waraaban qofa ilaaluufi gola ‘profile’ isaanii gaggalagalchanii ilaaluun maddaafi gartummaa isaanii adda baafachuun nidanda’ama.
4. Namoonni shira kanaan diyaasfooraa kana keessaatti wayyaanota biyya keessaa waliin ta’uun ijaaraman kunneen waan saba gara badisaatti oofu fiixee argannaan ammuma qabatanii ka’anii guyyaatti miidiyaarratti yeroo kudhan ol ba’uun xiinxalu. Xiinxala kanas ofii to’achuun gara barbaadaniifi ofii barbaadanitti haqaaqqatu. Yoo danda’ame seenaa ittiin jajallisu; ittiin sabboontota oromoo mataa cabsuuf tattaafatu.
5. bara darbe kana sababa Master plan’ walqabatee mataa haaddadhaa, xalayaa akkanaafi akkasiitu Qaallittiidhaa dhufe..kkf kan jedhu , Qawween akkasii saamameera, wayyaaneen mo’amteettifi kkf jedhuun daldala guddaa umurii isaanii guutuu ittiin jiraatan hojjetatan. Kunoo torbee 2 as ammoo maqaa qubee tiin daa’ima galaafachiisuu eegalaniiru. barataa ol adeemaa kutaa 9 magaalaa Amboo keessaa dhabneerra; diinnis kunoo nujalaa ajjeesee jira. Akka guutuu biyyaattis harka qullaa barattoota keenyaa dirreerratti yaasanii suuraafi dhiiga isaaniitiin akkuma amala isaanii daldalachuuf qophii fixaniiru. OROMOO! Wayyaanee injifachuuf qabsoo hidahnnoo jabaa barbada; sanammoo kan dalagu jaarmiyaa siyaasati malee goota miidiyaa miti. Oromoon maallaqasaa maaliif akka olchaa jiru beekuufihubachuu qaba.
1. Oromoon akka kanaan hamma yoomiitti itti fufa?
2. Oromoon qaamota haqaan isaaf qabsaa’uufi dantaafi daldala siyaasaatiif kan burraaqaa jiru akkamiin adda baafata?
3. Oromoon qabsoo hadhaa’aa dhiigaafi lafee ilmaansaan danqaree asiin gahe kana akkamiin tikfatee galmaan gahata?
Mee Maxoo kanaa gadiis yeroo yoo qabaattan dhaggeeffadha!!
አሁን የደረሰን ሰበር ዜና
በሰው እጅ እሳት የሚጨብጡ የኦሮሞ ትግል መሪ ነን ባዮች የፖለቲካ ንግዳቸውን አቁመው የአመራርነት ሚናቸውን እንዲወጡ የሰይፈ ነበልባል ሬድዮ ኣሳሰበ።